ब्लग/विचार – ।।दाङ खबर।।
Home / ब्लग/विचार
त्यतिबेला सरकारले नै सिनेमा बनाउँथ्यो। प्रचार प्रसार मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रसार विभागले सिनेमाको निर्माणको काम गथ्र्यो। विभागले निर्माण गरेको सिनेमा ‘परिवर्तन’ मेरो पहिलो सिनेमा हो। २०२४ सालतिर मैले नाटकमा अभिनय गर्न थालिसकेको थिएँ। त्यसैले अभिनय मेरा लागि नौलो विषय नभए पनि ‘परिवर्तन’मा क्यामराको अगाडि अभिनय गर्नु भनेको पहिलो पटक नै थियो। वरिष्ठ …
२०३५ चैत्र ११ गते बुबा स्व. कोमानन्द जोशी र आमा झग्गी जोशीको कोखबाट घरको कान्छो छोराकारुपमा जन्मिनु भएका वसन्त जोशी दाङमा चल्तापूर्जा व्यवसायी हुनुहुन्छ । श्रीमती र एक छोरा र छोरीको साथमा घोराहीमा सप्तरंगी डिजिटल कलर ल्याव सञ्चालन गरेर बस्नु भएका जोशी दाङ जिल्ला उवासंघको उद्योग उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । कार्यसमिति …
तँ त साह्रै बिग्रिस नि बद्री’, ‘हाँसी देउ एकफेर’ लगायत चलचित्रमार्फत दर्शक राम्रो हँसाएका वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यफेरि ‘सत्रु गते’मार्फत ठूलो पर्दामा फर्किएका छन् । यो चलचित्र उनले १७ वर्षपछि निर्माणसमेत गरेका हुन् । ‘जात्रा’बाट निर्देशनमा डेब्यु गरेका प्रदीप भट्टराईलाई लिएर आचार्यले चलचित्र बनाएका हुन् । प्रचार प्रसार समेत राम्रो …
स्वर्गद्वारी प्युठानको मात्र नभई नेपालका प्राचीन मन्दिरहरू मध्ये एक मन्दिर हो । प्युठानको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रम समुन्द्र सतहदेखि करिब २ हजार १ सय मिटरमाथि रहेको छ । प्युठानको प्रमुख बजार बाग्दुलाबाट मात्र २३ किलोमिटर टाढा रहेको छ । सत्ययुगमा देवताहरूले यात्रा गरेको तपोभूमिमा रोल्पा जिल्लाको रुम्टी गाउँमा १९१६ …
राजा विक्रमादित्यले एकपल्ट कालिदाससँग भने, ‘तिमी विश्वका महान् साहित्यकार र बुद्धिजीवीमध्येमै सर्वश्रेष्ठ मानिन्छौ । तर, त्यसअनुरूप तिम्रो रूप, शरीर कालो र कुरुप छ ।’ यो सुनेर कालिदास त्यतिबेला केही बोलेनन् । एक दिन राजा विक्रमादित्यलाई ज्यादै तिर्खा लाग्यो । कालिदासले राजाका लागि माटो र सुनको दुईवटा भाँडामा पानी ल्याएर भने, …
दाङ, चैत ७ – नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्व पार्न सफल एक परिवार हो – कोइराला परिवार । पिता कृष्ण प्रसाद कोइरालाको पालादेखिनै समाजसेवा र राजनितिमा होमिएको यो परिवार अन्तत: गिरिजा प्रसाद कोइरालाको देहवसानसँगै अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । उनको निधनपछि सफल नेतृत्व वहन गर्न सक्ने उत्तराधिकारीको अभाव नेपाली काग्रेसमा सहजरुपमा खट्किएको अनुभव …
२०७४, ५ चैत्र सोमबार १३:१४
वन मुलुक समृद्धिको आधार हो, मन्त्री बस्नेत
काठमाडौँ, चैत ५ । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रलाई उचित सदुपयोग गरेर मुलुक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउन सकिने बताउनुभएको छ । सञ्चारकर्मीसँग आज पुल्चोकस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा छलफल गर्दै उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि वन क्षेत्रमा व्यापक र अपार सम्भावना रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री बस्नेतले …
२०७४, ५ चैत्र सोमबार ०६:२२
कथित बोक्सी आरोप सम्बन्धमा केही कुरा
आर.वि. जीसी-आज एक्काइसौं शताब्दीको युग अर्थात् सूचना तथा सञ्चार, विज्ञान, प्रविधिको रजगज र दुनियाँ ब्युझे, जागेको समय चेतनामा पनि प्राय दिनहुुँजसो हाम्रा छोरी चेली, आमा बज्यै दिदीबहिनीहरु कथित बोक्सीको आरोपमा कुटिन्छन्, पिटिन्छन्, अपहेलित एवं अपमानको सिकार हुन्छन् र भइरहेछन् भन्ने खबर सुन्दा, सुनाउँदा हामी जनता, हाम्रो देश, हाम्रो सांस्कृतिक चिन्तन, …
२०७४, ४ चैत्र आईतवार २१:४०
प्रेम मन पर्नुभन्दा फरक हो।
रोजिन शाक्य कुनै व्यक्ति किन मायामा पर्छ? किन कसैको प्रेम सम्बन्ध दीर्घकालीन हुन्छ त कसैको प्रेम पानीको फोका सावित हुन्छ? यस विषयमा मनोवैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले अनेकन् खोज एवं प्रयोग गरेका छन् भने अनेकन् सिद्धान्त विकास गरेका छन्। यसै कारण प्रेमका बारेमा सबैमा उत्सुकता एवं कौतूहलता हुन्छ। प्रेमका मूलत: चारवटा सिद्धान्त …
२०७४, ४ चैत्र आईतवार १५:०९
देशको बारेमा प्रसंग चल्दा नेताहरुले देश खत्तम पारेु भन्ने वाक्य हामी सबैले भन्दै र सुन्दै आएको हो। अब यस्तै प्रसंगमा नेताहरुले के भन्छन् त्यो पंक्तिकारलाई जानकारी छैन। किनकि पंक्तिकारको नेताहरुसँग कुनै हिमचिम र उठबस छैन। नेतासँग चिनजान भनेको मेरो स्थायी ठेगाना रहेको काठमाडौं वडा नम्बर १६ को वडा अध्यक्ष र …